War deg deg ah: saraakiil iyo amiiro alshabaab ah oo lalaayey. | SMC
Home WARARKA MAANTA War deg deg ah: saraakiil iyo amiiro alshabaab ah oo lalaayey.
War deg deg ah: saraakiil iyo amiiro alshabaab ah oo lalaayey.
Wararka ka imaanaya Degmada Buale ayaa sheegaya in weerar cirka ah lagu diley saraakiil iyo amiiro katirsan dagaal yahanada alshabaab.
Duqeyn diyaaradeed oo kadhacdey degmada Bu’aale gar ahaan Xaruntii amiyaadka al shabaab oo maal mahan dowro ugu socotey saraakiil gaareysa 95 xubnood kuwaas oo ka kala socodey gobolada ay maamusho xarakada alshabaab ayaa lagu soo waramayaa in dhamaantooda halkaasi lagu duqeeyey sida ay sheegeen saraakiil katirsan wardoonka soomaaliya.
Sheekh Xuseen Filow oo ahaan jirey waaliga walaayada Jubooyinka ayaa lasheegey in uu ku dhaawacmey duqeynta, halka warar is khilaafsan kasoo baxayaan Daahir Gacmey oo ah waaliga walaayada Jubooyinka in lagu diley weerarka, halka wararkalana ay sheegayaan in uu dhaawac garaab ah yahay.
Dhinaca kale weerar kale oo kadhacey deegaan udhaxeeya Degmada Jilib iyo Deegaanka Xaramka ayaa lasheegey in lagu burburiyey 80 gaari oo alshabaab horey uga qabsatey dagaalo ay lagashey ciidamada kenya, kuwa ethiopia iyo ciidanka soomaaliya.
Gawaaridan ayaa lasheegey alshabaab in ay qorsheyneysey in ay weeraro argigixiso u adeegsato ayadoo iska dhigeysa nabad ilaalinta soomaaliya.
Duqeyntan ayaa lasheegey in uu ku geeriyoodey Adan Geedi oo loo yaqaano Abu Xudeyfa oo ah Amiirka guud Gaashaandhiga alshabaab oo kolayada baabuurta lasocodey mana jiro warar madax banaan oo xaqiijinkara geerida amiirkan.
Xiriiro kala duwan oo aan lasameyney dadka deegaanka ayaa inoo suura galin isgaarsiinta deegaanka oo hawada kamaqan darteed
Ciidamada faransiiska ayaa la aamin san yahay in ay kadan beeyaan walow aysan weli cidi sheegan.
Previous articleHeshiis halis ku ah Somalia oo ay wada saxiixdeen Qatar & Dowladda Federaalka ah
Next articleXog Sax Ah Abdiaziiz Lafta Gareen ayaa Berrito Barqadii kusii jeeda magaalada marka ee Xaruunta Gobolka Shabeelad